Amawashi ngesiJalimane, i-die uhrzeit, i-Telling the Time ngesiJalimane, Wie spät ist es?
Izikole zase-German High School
Kulesi sifundo, sizokhuluma ngendaba yamawashi aseJalimane. Inkulumo yamahora aseJalimane; Ingafingqwa ngaphansi kwezihloko zokubuza ukuthi yisiphi isikhathi ngesiJalimane, isho isikhathi ngesiJalimane, ibuza futhi isho isikhathi ngolimi olusemthethweni noluxoxisanayo.
Okokuqala, asigcizelele ukuthi ukuze sikwazi ukusho isikhathi ngesiJalimane, Izinombolo zesiJalimane Kuyadingeka ukuthi bazi okungenani izinombolo zaseJalimane kusuka ku-1 kuye ku-100 kahle.
Kunzima ngathi ukuthi sitshele amahora ngaphandle kokwazi izinombolo zaseJalimane ngqo. Izinombolo zaseJalimane uma ungazange ukufunde kahle, okokuqala Ngemuva kokufunda izinombolo kahle, kufanele ufunde amawashi aseJalimane. Awukwazi ukufunda amahora ngaphandle kokwazi izinombolo. Futhi, lapho sifunda amawashi aseJalimane, akufanele sicabange njengoba sisho ngesiTurkey. Sizonikeza imininingwane ngezansi. Isihloko samawashi aseJalimane siyisihloko esibaluleke kakhulu, njengoba sisetshenziswa kaningi ekuphileni kwansuku zonke, njengezinye izihloko zethu eziningi, futhi sidinga ukufundiswa kahle, sidinga ukwenziwa kakhulu.
Isihloko samahora aseJalimane sivame ukufakwa kwikharikhulamu yebanga lesi-9 lesikole samabanga aphezulu futhi kungenzeka sibonakale ebangeni le-10 nele-11. Kulesi sifundo, amahora aseJalimane, izihloko ezilandelayo zizohlolwa ngokuningiliziwe:
Ungazibuza kanjani ngesiJalimane?
Ungasho kanjani amahora aphelele aseJalimane?
Amahora ama-German amahora angakanani?
Uthi kanjani amawashi e-German quarter?
Ungasho kanjani emahoreni aseJalimane nemizuzu?
Kulesi sifundo thina Amahora amaJalimane Sizozama ukuhlanganisa zonke izici ngangokunokwenzeka. Kulesi sifundo sizofunda ukuthi amahora agcwele, isigamu samahora, ikota nemizuzu ngesiJalimane. futhi Sizofunda ukubuza nokusho ukuthi isikhathi sini ngesiJalimane. Sizofunda nemishwana yokusho amahora asemthethweni namahora ezingxoxweni zansuku zonke. Umqondo wesikhathi indawo yesikhathi, futhi kusayithi lethu. Izinsuku zaseJalimane isifundo kufanele futhi sifundwe njengomqondo wesikhathi. Futhi kusayithi lethu Izinyanga zaseJalimane Isihloko esishiwo singesinye sezifundo okufanele zifundwe ngemuva kwamahora aseJalimane. Futhi, uma ufisa ngemuva kokufunda lezi Izinkathi zaseJalimane Ungaphinda upheqa.
Kancane manje Ukubuka amaJalimane Asingene esihlokweni sethu. Ukucela isikhathi ngesiJalimane nokusho ukuthi isikhathi ngesiJalimane sivame ukufundiswa kubafundi bebanga lesi-9 ezikoleni, nokho, abafundi abangathathi izifundo zesiJalimane ebangeni lesi-9 noma abathathe izifundo zesiJalimane kodwa abangazithathi ngokwanele banganikezwa izinkulumo zamahora aseJalimane. ebangeni le-10.
Njengoba wazi, usuku lungamahora angama-24. Ezingxoxweni zethu zansuku zonke, kungakhathaliseki ukuthi ihora lesishiyagalombili ekuseni noma ihora lesishiyagalombili kusihlwa, uma sibuza ukuthi isikhathi sini, sihlala sithi isishiyagalombili. Ngakho besingeke sithi ihora lamashumi amabili. Lokhu kuyiqiniso ezingxoxweni zansuku zonke. Kodwa-ke, ezinkulumweni ezisemthethweni, isibonelo, emsakazweni, kuthelevishini, ezindabeni nasezindaweni ezifanayo, isikhathi sizoshiwo, kuyilapho sibizwa ngokuthi amashumi amabili kusihlwa kanye nesishiyagalombili ekuseni. Sikhuluma amahora angaphezu kuka-12 ezingxoxweni zansuku zonke, kodwa ezingxoxweni ezisemthethweni sikhuluma amahora angaphezu kwama-24 futhi izinombolo ezingemuva kwe-12 nazo ziyasetshenziswa.
INDLELA YOKUFUNA KANJANI ISIHLOKO ESIGENI?
Ukubuka ngesiJalimane: u-Uhrzeit uyafa
Ngo-German, amawashi abuzwa esebenzisa iphethini elandelayo.
Isikhathi sokubuza isiJalimane
1. Yini oyenzayo?
2. Wieviel Uhr kuyinto?Yini oyenzayo? futhi Wieviel Uhr kuyinto? umbuzo wemibuto ngesi-German isikhathi sini? Kusho ujuthi. Ungawasebenzisa womabili amaphethini, womabili asho okufanayo.
Ngo-German, iwashi libuzwa ngale ndlela.
Njengoba ungabona, lezi zinkulumo zesiJalimane ngesiNgisi Isikhathi sini? ve Kungasiphi isikhathi? lo mbuzo ufana nesimo.
Ulwazi olwengeziwe ngalokho okushiwo yi-letter abil ku-spät kusho ukuthi ungafunda kanjani nokuthi ungabhala kanjani lokhu I-Alphabet yesiJalimane Kuchazwe esihlokweni sethu isihloko. Uma ufisa, abangani bangafunda leso sihloko.
Ukutshela Isikhathi saseJalimane
Ngemva kokufunda ukucela iwashi ngesiJalimane, ake sicabangele ukuthi amawashi abizwa kanjani. (isibonelo, ku-1, njengehora lesihlanu)
Ukuxoxisana okusemthethweni nezincwadi (Formell) izinombolo ze-12-24 zisetshenzisiwe. (isib. amahora angu-20.00-awayi-9 nesishiyagalolunye).
I-Formell (Offiziell) Ama-Watches ngesiJalimane
I-Informell (Inoffiziell) Ilindile ngesiJalimane
Kukhona umehluko ekusetshenzisweni okusemthethweni nokungahleleki kwamawashi ngesiJalimane. okungavumelekile ukusetshenziswa kubizwa ngokuthi, lolungakahleleki kubizwa noma Inoffiziell Ngakho-ke, kufanele wazi ukuthi kunezingxoxo ezingavumelekile ezisetshenziswa ekuphileni kwansuku zonke uma kukhona okuthiwa i-Inoffiziell diye çıktı.
Ngokufanayo, amawashi ngokusemthethweni ungasho noma amahora offiziell futhi resmi wazi ukuthi kunokusetshenziswa okusemthethweni empilweni, izikhungo ezisemthethweni, izindaba, ithelevishini, umsakazo.
Sabe sesisebenzisa indaba yamawashi aseJalimane kokubili kokuphila kwansuku zonke okungakahleleki kokubili ngokuphathelene nokusetshenziswa ukusetshenziswa okusemthethweni ie Formell Okokuqala, sizosebenzisa i-Informell ekuphileni kwansuku zonke.
Okokuqala, ake siqale ngokusho amahora ngqo ngesiJalimane.
Isikhathi Esigcwele IsiJalimane Sisho
Ake sicabangele amahora ngqo kuqala. Ukuze ufunde kahle lesi sihloko, udinga izinombolo ngekhanda.
Indlela yokulandela isikhathi esiqondile yile ndlela elandelayo:
U-U u .. Uhr.Izibonelo Zesikhathi Esigcwele saseJalimane:
Isikhathi se-5: Ngabe u-Uhr
I-7 Isikhathi: Isikhathi esiphezulu
Isikhathi se-8: Es ist acht Uhr
Isikhathi ku-9: Es is u neun Uhr
Isikhathi ku-10: Isikhathi se-Uhr
Isikhathi se-12: Isikhathi esilandelayo Uhr
co ist Fünf ukubukela
co ist ezine ukubukela
co ist zehn ukubukela
co ist elf ukubukela
Ihora ishumi nanye
Kulula kakhulu ukusho amahora aqondile ngesiJalimane futhi ngaphezu kwezibonelo esinikeze ngenhla, ake sinike isithombe esilandelayo njengesibonelo.
Ungasho Isikhathi ngesiJalimane
Manje ake sibheke ukuthi lezi zibukeli ziyi-German kanjani.
Ungatshele Amadonga ngesiJalimane
EJalimane, amahora amahora alandelwa ukulandela indlela.
IsiJalimane Ungasho AmahoraI-halt +. (+ 1) ....
Uma iwashi liyizinxenye ezine nengxenye, indawo enamachashazi ihanjiswa kumadijithi amahlanu, hhayi amadijithi amane.
Igama halb lisho isigamu.
Ake sihlole izibonelo ezingezansi.
Ngehora lesine: I-Es ist halb fünf
Ngehora lesikhombisa: I-Es ist halb sechs
Isikhathi sesithupha nesigamu: Es is halb sieben
Isiqingatha seshumi esedlulile: I-el is el elf
Sekuyogamanxa ihora lesithupha
Es is halb zwei
Sekugamanxe ihora lokuqala
Ligamenxe ihora lesine
Amathathu amathathu amathathu
Ligamenxe ihora lesishiyagalolunye
Ligamenxe ihora leshumi
Ligamenxe ihora lesishiyagalombili
EJalimane, amahora amahora angabuye athi ezinkulumweni zansuku zonke phakathi komphakathi, njengoba kuboniswe ezihlokweni ezilandelayo:
halb sieben: ayisithupha nengxenye
halb acht: ayisikhombisa nengxenye
halb elf: eyishumi nengxenye
eyodwa nengxenye: halb zwei
ezimbili nengxenye: halb drei
ezintathu nengxenye: i-halb vier
Okubalulekile lapha, kubaluleke kakhulu ukukhumbula, ukuthi kufanele usebenzise ihora elizayo.
Manje ake sikunike isithombe se-German timetime.
Izibonelo ezifanekisiwe zisiza ukuthi indaba iqondwe kangcono futhi ikhunjulwe.
IsiJalimane Ungasho Amahora
* EJalimane, ungakhohlwa ukusho ihora nesigamu ngaphambi kwehora nehafu.
Ukusho i-German Times
Ukusho amawashi amathathu ngeJalimane ikota ve ikota Sizohlola ngezigaba ezimbili.
Imishwana esiyinikeze ngenhla isetshenziselwa ukutshela ama-quarter-hours aseJalimane.
Es ist Viertel nach ……………………. iphethini “ikotaKusho ujuthi ". Uma ikota yehora lidlula lapho iphuzu lishiywa lingenalutho, leyo nombolo ilethwa.
I-Viertel vor ……………………. iphethini “ikotaKusho ujuthi ". Inani lezindawo zokuhlala lilethwa endaweni eshiywe ingenalutho ngechashazi.
Ngale ndlela, masingakhohlwa ukuthi, kumawashi wekota laseJalimane, isikhunta "ikota"Igama"ikotaFuthi incwadi yokuqala yaleli gama ihlale ifeleba.
Ungasho kanjani ukuthi isikhathi saseJalimane sekwedlule ikota?
NgesiJalimane kuthiwa ihora lesikhathi sokubheka njengoba kuboniswe iphethini elilandelayo:
I-Viertel nach ...............
Kumshwana ongenhla, igama elithi nach lisho "ukudlula". Uma ikota yehora lidlula, lelo nani lilethwa endaweni enamachashazi. Isibonelo, uma kuyikota edlule ku-3, kuzofanela ubhale u- "drei" endaweni enamachashazi. Igama elithi Viertel lisho ikota. Isihloko sizoqondakala kangcono ngezibonelo esizonikeza zona manje.
Es is Viertel nach sieben
Ikota yesikhombisa edlule
Le yi-Viertel nach neun
Isikhathi yisikota ngehora lesishiyagalolunye
Es is Viertel nach elf
Es is Viertel nach zwölf
Ligamenxe ihora leshumi nambili
Es is Viertel nach zwei
Ikota edlule ngehora lesibili
Ikota yesithathu edlule
Le yi-Viertel nach sechs
Ikota edlule ngehora lesithupha
Ezinye izibonelo zamawashi wekota laseJalimane:
Ingxenye yezinhlanu iyadlula: Es is Viertel nach fünf
Ikota yesishiyagalolunye yehora idlula: Es ist Viertel nach acht
Ingxenye yesine: I-Viertel nach vier
Ingxenye yesishiyagalombili: I-Viertel nach sieben
Indlela Yokubiza Ikota YesiJalimane?
Uma uthi amahora aseJalimane unayo ingxenye yesine kuthiwa njengoba kuboniswe iphethini elilandelayo:
I-Viertel vor ...............
Kumshwana ongenhla, igama elithi vor lisho ukuthi "khona, hlala". Uma kukhona ikota yehora, leyo nombolo ilethwa endaweni enamachashazi. Isibonelo, uma kukhona ikota ngehora lesine, indawo enamachashazi kufanele ibhalwe ukuthi "vier". Igama elithi Viertel lisho ikota. Isihloko sizoqondakala kangcono ngezibonelo esizonikeza zona manje.
Le yi-Viertel vor neun
Itholakala ku-Viertel vor zehn
Yihora leshumi nanye kuya kweleshumi nanye
Es is Viertel vor zwei
Ligamenxe ihora lesibili
Itholakala ku-Viertel vor vier
Ikota kuya kwelesine
Es is Viertel vor zwölf
Le yi-Viertel vor fünf
Ikota kuya kwelesihlanu
Itholakala ku-Viertel vor sechs
Iwashi inekota kuya kwemihlanu: I-Viertel vor fünf
Iwashi linamakamelo ayisishiyagalombili: I-Es ist Viertel vor acht
Iwashi linamakamelo amane: I-Vi isil Vierel vor vier
Ihora linemigqa eyisikhombisa: Es is Viertel vor sieben
Ama-German Watch in Minutes
E-German, imizuzu isethwe ngokulandela isibonelo esilandelayo.
Ngaphezulu kwamaminithi indawo yokuqala enamachashazi ukuya kumzuzu, iphuzu lesibili endaweni lapho iwashi Sizokwenza ukuletha.
lapha vor kusho ukuthi izindlela zegama-kala futhi by Sisanda kusho ukuthi leli gama lisho ukudlula.
Esikhunjini esingenhla by izwi ukudlula, ebusuku Kusho ujuthi, vor Uma igama lithi i-var, kala Kusho ujuthi. Isibonelo, ukusho ihora sengathi yihora lesihlanu.byKusetshenziswa igama ”. Ukutshela ihora elifana nehora lesihlanu, "vorKusetshenziswa igama ”. Kumafolumu angenhla, umzuzu ulethwa endaweni yokuqala, kuthi ihora lilethwe endaweni yesibili.. Ungakhohlwa lokhu ngokuphelele. Ngaphandle kwalokho, utshela isikhathi ngokungalungile. Ake sibone izibonelo zethu zokutshela amawashi amaminithi aseJalimane.
co ist Fünf by zehn.
Ihora onu ezinhlanu ukudlula
co ist zehn by Two
Ihora ezimbili on ukudlula
co ist zwanzig by drei
Ihora amathathu amashumi amabili ukudlula
co ist funfundzwanzig by ezine
Ihora ezine zazo amashumi amabili nanhlanu ukudlula
co ist elf by Sieben
Ihora Isikhombisa ishumi nanye ukudlula
co ist zehn by Fünf
Ihora ezinhlanu zazo on ukudlula
Manje ake sinikeze izibonelo zamawashi aseJalimane ayishumi kuya kwelesihlanu ihora.
co ist Fünf vor Fünf
Ihora kuya kwabahlanu ezinhlanu i-var
co ist zehn vor drei
Ihora kuya kwabathathu on i-var
co ist zwanzig vor acht
Ihora kuya kwesishiyagalombili amashumi amabili i-var
co ist acht vor Two
Ihora kabili eziyisishiyagalombili i-var
co ist zehn vor ezine
Ihora ngehora lesine on i-var
co ist zwanzig vor sechs
Ihora kuya kwayisithupha amashumi amabili i-var
co ist zwanzig vor Sieben
Ihora kuye kwabayisikhombisa amashumi amabili i-var
Manje ake sinikeze izibonelo zamahora aseJalimane ngokubili kokubili okukhona nokudlula:
Isikhathi sesithathu: Es ist zwanzig nach drei
Ngeshumi nantathu nantathu: Es ist zwanzig vor drei
Ihora lesishiyagalolunye lingaphezu kwama-amane: Es ist vierzig nach fünf
Ihora liyisihlanu kuya ku-40: Es ist vierzig vor fünf
Es is zehn nach zwei: Kuyishumi emva kokuyishumi.
Iwashi ezintathu kwewashi:
I-fünfundzwanzig nach fünf: I-Five kuya ku-5
I-elf nach sieben: Iwashi idlula ngehora leshumi nanye
I-fünf vor fünf: Kunezinhlanu kuya kwezinhlanu
Isikhathi esiphezulu: Iwashi ineshumi
Es ist zwanzig vor neun: Isishiyagalolunye kuya kwehora lesishiyagalolunye
I-albhamu kuphela: Kukhona ayisishiyagalombili ngesikhathi
Ukuze sikwazi ukufunda amahora aseJalimane, sathi okokuqala kufanele sikwazi ukufunda isiJalimane.
amasayithi ethu izinombolo ze-German Uma ufisa, ungabuye ubuke lokhu:
Amahora aseJalimane Formell - Offiziell (Official) Ukuthi
Senze zonke lezi zinkulumo ezingenhla ngendlela esetshenziswe empilweni yansuku zonke, singayinaki impilo esemthethweni. Kodwa-ke, ezimweni ezifana nenkulumo esemthethweni nezincwadi, kukhulunywa amahora angaphezu kwamahora angama-24. Isibonelo, uma sekuyihora lesibili emini, kubizwa ngokuthi ishumi nane. Ngaphezu kwalokho, iphethini esizoyinika ngezansi isetshenziswa ngezikhathi zomsebenzi. Ake sinikeze izibonelo ezimbalwa zezimo ezinjengalezi:
NgesiJalimane, amahora abhalwa noma akhulunywe kanjena emsakazweni, kuthelevishini, ezindabeni nakwezinye izindawo ezifanayo.
Es ist ……………………. Eh …………………………
Kuleli phethini elingenhla, siletha ihora endaweni yokuqala enamachashazi, neminithi endaweni yesibili enamachashazi.
co ist zehn ukubukela zwanzig
Ihora onu amashumi amabili ukudlula
co ist drei ukubukela zehn
Ihora amathathu on ukudlula
co ist Sieben ukubukela vierzig
Ihora eziyisikhombisa Amashumi amane (Isikhombisa Amashumi amane ukudlula)
6:50 : Es sechs ukubukela fünfzig
9:40 : Es neu ukubukela vierzig
22:55 : Es Zweiundzwanzig ukubukela fünfundfunfzig
Amahora WaseJalimane iFormell - Ezinye Izibonelo zikaOffiziell (Okusemthethweni) Ukuthi:
Ngabe u-Uhr zwanzig: I-clock isebenza kuyo amashumi amabili
I-Uhr fünfundzwanzig: Ngehora leshumi nanhlanu
7. I-40 Ngesi-Uhr vierzig
10. 45 Ngabe uhr fünfundvierzig
20. I-55 Esiswanwe yi-Uhr fünfundfünfzig
I-22.30 I-e-mail ishicilelwe ngu-Uhr dreißig
Okokugcina, sincoma ngokuqinile ukuthi uhlola i-FORMELL yethu - INFORMELL ukubukela amasampuli alungiselelwe ngezansi.
Ukubuza nokukhuluma Isikhathi ngesiJalimane
Sifisela nina nonke impumelelo ekufundeni isiJalimane.
Ungabhala noma yimiphi imibuzo, ukuphawula kanye nokusikisela mayelana nezifundo zethu zaseJalimane ezinkundleni zamaJerman noma emazwini asezansi.
# INDLELA YOKUFUNA KANJANI ISIHLOKO ESIGENI?
# Isikhathi sokubuza isiJalimane
# Ukutshela Isikhathi saseJalimane
# Isikhathi Esigcwele IsiJalimane Sisho
# Ungatshele Amadonga ngesiJalimane
# Ukusho i-German Times
# Es ist Viertel vor …………………………………….
# Ungasho kanjani ukuthi isikhathi saseJalimane sekwedlule ikota?
# Indlela Yokubiza Ikota YesiJalimane?
# Ama-German Watch in Minutes
# Amahora aseJalimane Formell - Offiziell (Official) Ukuthi
# Es ist ……………………. Eh …………………………
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe emasontweni angu-2 edlule, ngoNovemba 24, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoDisemba 4, 2021.
Izifundo ZaseJalimane Zabaqalayo
Tags: 10. inkulumo yesi-German yesifundo, 10. ama-watch watch German, 9. inkulumo yesi-German yesifundo, 9. ama-watch watch German, isiJalimane ungatsheli iwashi, ama-watch watch German, Yini okusha